Ejipta: Tena azo ekena ho safidy anoloana an’i Mubarak ve i Amr Moussa? · Global Voices teny Malagasy
Ejipta: Tena azo ekena ho safidy anoloana an'i Mubarak ve i Amr Moussa?
Voadika ny 08 Febroary 2011 6:08 GMT
Ity lahatsoratra ity dia iray amin'ireo tatitray momba ny Hetsi-panoherana ao Ejipta 2011.
Niteraka fanehoan-kevitra samihafa ny eritreritr'i Amr Moussa ho lasa filohan'i Ejipta atsy ho atsy, raha mbola manohy miantsoantso ny fialàn'i Hosni Mubarak ny Ejiptiana efa ho 12 andro misesy izao.
Omaly, Moussa, mpomba tsy misy fepetra an'i Mubarak teo aloha sady sekretera jeneralin'ny Ligy Arabo ao Kairo, dia nitsidika ireo mpanao fihetsiketsehana tao an-kianjan'i Tahrir, ho fanehoana firaisankina.
Ny sasany niarahaba sy nanokatra ny tànany nandray azy, ny hafa nanontany tena hoe nahoana no olona niara-niasa faran'izay akaiky tamin'ny fitondrana no nanaiky ho toy ny safidy iray milahatra amin'i Mubarak..
Ireto manaraka ireto ny sasany tamin'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny Twitter:
@bbcbreaking: Mandray anjara amin'ny hetsi-panoherana ao an-kianjan'i Tahrir ao Kairo ny sekretera jeneralin'ny Ligy Arabo, Amr Moussa.
@3arabawy: Nahoana ny olona no mihevitra fa olona azo antoka sy azontsika ifampiraharahàna i Amr Moussa? TSY izany izy! Mpankatoa fatratra ny fitondrana foana izy hatrizay. #Jan25
@hibaalali: Endrika tsy nomba ny atsy na ny aroa no ilaina hameno ny banga eo anelanelan'i #Egypt & Etazonia/Israely manoloana ireo fitakiana samihafa. ElBaradei sa Amr Moussa /ity farany no azoazo kokoa#Jan25
@BassieAhmad: Mety ho Filoha lehibe ho an'i #Egypt i #Amr #Moussa. Andriamanitra anie hitahy an'i Amr Moussa #JAN25
@SuadHani: tiako ny fandraisan'i Amr Moussa andraikitra, tiako ny vahoaka nanao izay hahatanteraka ny fanovàna, tiako ny Ejiptiana, tiako ny Revolisiona! #jan25
@imunroe: Manaraka lalan-kevitra mazava ny hoe i Amr Moussa ho toy ny mpitarika an'i #Egypt atsy ho atsy — fanoloana mpitarika iray tsy mamely amin'ny filohan'ilay Ligy Arabo efa tsy mamely rahateo
@: Ao an-kianjan'i #tahrir i Amr Moussa amin'izao fotoana, ary efa resabe any anaty Twitter izy izao #egypt
@breezeblessings: Manana tantara maharesy lahatra sy asa nisy fiantraikany ary mahavariana tokoa i Amr Moussa … Andraso, inonaaà? #StrongSarcasm #Fail
@kareemelmasry: Aleo maka an'i Amr Moussa hitarika firenena goavana toa an'i #egypt, toy izay teny mirehidrehitra sy sary mampandry adrisa . Toy izay nolazain'i @alhattlan : mipetraha any an-trano. #jan25
@Falasteeni: Tsy mitsahatra ny miteny ireo mpampita vaovao Tandrefana fa hoe malaza eo anivon'ny Ejiptiana i Amr Moussa…Mampieritreritra..Diso ve aho? #jan25
@AymanHAK: mirona mankamin'ny safidy Amr Moussa ho an'i Ejipta aho – Ny pragmatista (Avy amin'ny mpandika: Ireo izay mihevitra fa ny hevitra iray dia miankina amin'ny fampiharana azy mivantana) & tia tanindrazana iray izay misitraka ny fanajan'ny vahoaka azy dia efa voasedra amin'ny maha-politisiana
@NasseRibnHamad: @hussain_info @khalidalkhalifa @Zeinobia Amr Moussa dia mpanao taty reraka, mpanararaotra. Mba taiza izy herinandro vitsy na andro vitsy lasa izay? #Jan25
@etharkamal: Mpanararaotra daholo ny olona tsirairay, rehefa jerena amin'ny fomba itrandrahan-dry zareo ny zava-mitranga eto Ejipta. *mampikohaka ahy* @ElBaradei *mampikohaka ahy* Amr Moussa #egypt #jan25
@sarahasseel: Fifidianana Demokratika: ny vahoaka mifidy ho an'i Amr Moussa, ny hafa ho an'i Baradei, na i Ayman N., na tsy haiko koa hoe iza no mbola ho avy eo! tsy hisy intsony intsony mihitsy ny hoe 99% ho an'olon-tokana!
@SarraMoneir: Araka izany ny fanontaniana izao dia ny hoe: raha mitady filoha tsy avy amin'ny tafika isika dia ho i amr moussa ve? baradei? fampitahàna am-piheverana ve izany?
@srichani: Dia inona izao no nataon'i Amr Moussa teo an-kianjan'i Tahrir hatramin'ny androany? mampahatsiahy ahy trondro iray mitankisina amina antsantsa. toy ny kantsentsitra.#jan25 #egypt
@De7mee_: Miankina amin'ny tanorany ny hoavin'i Ejipta fa tsy amin'ireo mpanao politika efa feno 70 taona akory (amr moussa & Elbarradie) #egypt #jan25 #tahrir